ဗမာဟေ့ ဗမာကွ.. (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ~ ဒီမိုဝေယံ
အခု ရှေးက ပြီးခဲ့တာရေးလာလို့ အဝေဖန် မစောကြပါနဲ့ဦး။ ကဲအရေးဆိုရင် ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်က အလွန်အရေးကြီး အရေးပါလို့ ရေးရတာပါ။ တရုတ်တွေ ကျူးကျော်လာတာလေး စကြရအောင်ပါ။ ၁၉၅၂- ကနေ ၅၉ -အထိ တရုတ်ဖြူ ကျူးကျော်တပ်တွေကို မြန်မာ့တပ်မတော်က တွန်းလှန်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါ ဒီမီုကရေစီခေတ်က လေကြောင်း တိုက်ပွဲကြိးတွေမှာ ဗိုလ်ပီတာ ဆိုတာ သူရဲကောင်းအဖြစ် နာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၈- လောက်ကထင်တယ်။ ဗိုလ်ပီတာ အသက်စွန့်ပြီး တရုတ်ဖြူ စစ်လေယာဉ်ကြီးကို မိမိလေယာဉ်နဲ့ အသေခံထိုးချပစ်ခဲ့တာ။ ကျနော်တို့က ငယ်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ပီတာ ပုံကို ကျောင်းမှာ ပြတယ်။ သူ့သတ္တိနဲ့ သူအသက်စွန် ခဲ့တာကို ချီးမွှန်းကြ ရှင်းပြကြတော့ ငယ်ငယ် ချာတိတ်ဘဝက စစ်သားလုပ်ချင်လိုက်တာ။ ကျနော်တင်မဟုတ်ဘူး။ အတော်များများက အသေခံ တိုက်ရတာ ချချင်ကြတာ။ ကျောင်းမှာ စစ်တိုက်တမ်း ကစားကြရင် ဗိုလ်ပီတာကွ အော်ကြရတာ။
အခု တရုတ်ကြီးက သန်းရွှေ အသုံးမကျ ညံ့တာကို အညှာကိုင် ပြည်သူတွေ သူ့ကို မကြည်လေ မျက်ဖြူဆိုက်လေ ယီးစင်း ကြိုက်လေပေါ့။ ခါးပိုက်ထဲ ထဲ့ထားလို့ အပီပေါ့။ စကားချပ် (မြန်မာ့ရေပြင်၌ တရုတ်နိုင်ငံမှ ခေတ်မှီ ငါးဖမ်းသဘောင်္များ တရားမ၀င် ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီးနေကြောင်း သတင်း ဆောင်းပါး အဆုံးမှာ ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်.. ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာပြန်ရေးထားတာပါ..။ တချို့သတင်းတွေ ဆရာဘာကြောင့် သိနေတယ်ဆိုတာ စာဖတ်ပရိသတ်ကို ထပ်ပြောပြချင်တာကတော့ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ဟာ သန်းရွှေသား ထွန်းနိုင်ရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ရဲ့ ညာလက်ရုံး ထောက်လှမ်းရေး အဆင့်မြင့်အရာရှိ ဗိုလ်မှုးချုပ်ကျော်သိန်းနဲ့မယား ညီအကိုတော်သူပါ) ငါးဖမ်းခွင့်က သန်းရွှေ လက်ထဲမှာလေ။ ငါးဖမ်းခွင့်ကို မသိချင်ယောင် ဆောင်ပေးတာက $$$$$ နောက် သူကလည်း ပီကင်းမှာ အိမ်ရှိတယ်လေ။ အိမ်ကြီးတွေမှ ရပ်ကွက်လိုက်။ ပြီးဆွေမျိုး ပေါက်ဖေါ် ဆိုလား။ ဖင်ပေး ပေါင်းနေရတာလေ။
နောက် ခိုးဖမ်းနေတဲ့သင်္ဘောကို ဖမ်းဖို့က သန်းရွှေ အမိန့်မရဘဲ သွားလုပ်လိုက်ရင် ဖမ်းတဲ့အကောင် ဖင်ယားနေတယ်ဆိုပြီး တရုတ်သင်္ဘောပေါ် ဗလာကင်း အတင်ခံ ရမှာ တွေးကြည့်။ အဲ့ဒါကျတော့ ဗိုလ်မှုးစိုင်းသိန်းဝင်းကို ကယ်ခဲ့တဲ့ Blink Hacker Groupလည်း ကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Blink Hacker Groupက အင်တာနက် မှာဘဲ ကယ်နိုင်တာ ရေနက် ဗလာကင်း ကို ဘလင်ကာ ကယ်ဖို့ ဘောကွင်းမရှိဘူး။ နောက် ခိုးဖမ်းနေတာကလည်း ကိုးကိုးကျွန်းမှာ ဧရာမရေဒါကြီးတွေ ထိုင်ထားတော့ သူတို့သင်္ဘောတွေနား ဘယ်လိုလုပ် ကပ်နိုင်ပါ့မလဲ။ အဲဒီသင်္ဘော စောင့်ကြည့်တာ မျက်စောင်းထိုးရင်တောင် အဟမ်းဟမ်း လုပ်ခံရမယ်။ ခိုးနေတာတောင် ဒို့တပ်မတော်ရေက အထက်ကို သတင်းပို့ရဲ ကြပါ့မလား။ ဒါ ဘဘကြိး ဘော်ဘော်တွေလေ။
အဆိုလေးရှိတယ်လေ။ FIGHT , FLOW or FLEE။ ဖိုက် ဖေါ ဖနောင့် (ဖနောင့်နဲ့ တင်ပါးတသားတည်း ကျအောင်ပြေး) တော်လှန်ဖို့ကတော့ အခုနေ ကတည်းကက ဗမာတွေသတ္တိပြပြီး ဗမာဟေ့ ဗမာကွလို့ မအော်ရဲ ကြရင် ပြင်ထားကြပေတော့ ၀မ်စွေ့ဝမ်စွေ့အော်ဖို့။ အော် တခါတခါ တွေးမိတယ်။ ဗမာဟေ့လို့ တချို့စစ်ဗိုလ်တွေ တရုတ်ဖြူနဲ့ တိုက်ရတုန်းက အော်ခဲ့ကြသေးတယ်။ တရုတ်ဖြူတွေ တပ်စွဲထားတဲ့တောင်ကုန်းတွေကို တက်သိမ်းခဲ့ကြတယ်။ ဒီနောက် တချို့ သူပုန်တွေနဲ့ တိုက်ကြတုံးက ဗမာဟေ့လို့အော်ပြီး စခန်းသိမ်း အတင်းတက်သိမ်းပြိး သူရ နှစ်ထပ်ကွမ်းရခဲ့ဘူးသူ ကြားဖူးတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်ကြတော့ ဗမာဟေ့ အော်ပြီး တောင်ပေါ်တက် စခန်းသိမ်းတာမျိုး တက်ကြတယ် ပြောသံမကြားရတာ အနှစ် ၅၀- ဘက်ရောက်နေပြီ။ ၀မ်ခ မာနယ်ပလော သိမ်းတာက လက်နက်အသားစီးနဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ အသကုန်ပစ် ယင်တကောင်မှ မကျန်တော့မှ တဘက်က လူအကုန်ဆုပ်သွားတော့မှ ပြန်ပစ်သံ တိတ်သွားတော့မှ တယောက်စ နှစ်ယောက်စ ဂျိမ်းဘွန်းပုံစံနဲ့ ဟိုနံရံကပ်ဝင်။ လူနှစ်ယောက်စနဲ့ အရင်ဝင် သိမ်းတာမျိုး။ စခန်းတခုလုံးကို အလစ် ကိုယ့်အင်အားက သိပ်ရှိတာမဟုတ်ဘဲ သတ္တိနဲ့ မိုက်ရူးရဲ တက်သိမ်းတာမျိုး မကြားရတော့ပါဘူး။ အဲဒီဗိုလ်ကြီးကတော့ သူရနှစ်ထပ်ကွမ်းရတယ် ပြောကြတာပဲ။ ရန်သူတပ်စခန်းက ၂၅၀- လောက် တရုတ်ပြည်ကနေ သင်တန်းဆင်းပြန်လာတဲ့ သူပုန်တွေ လက်နက်အပြည့်နဲ့ သူက ရှိတာ စစ်သား ၁၀၀-လောက်နဲ့ သေနတ် မဖေါက်ဘဲ အလစ် ဗမာဟေ့ ဗမာဟေ့ ညာသံပေး အော်ဟစ် တက်သိမ်းတာ ရန်သူက လန့်ထွက်ပြေးကြတော့တာ။ လက်နက်တွေ တပုံကြီးရလိုက်တယ် ပြောတာပဲ။
၁၇၅၂- မှာ အလောင်းမင်းတရားကြီး မုဆိုးဘိုရွာကို ထန်းလုံး ခံတပ်နဲ့ ခံနေတယ်။ မွန်ရန်သူတွေက လချီဝိုင်းထားတယ်။ ခံတပ်ထဲမှာ ရိက္ခာလျှော့လာရယ် နောက်မွန်တပ်က တချို့ စစ်ကိုင်းဘက်ရွှေ့တာ သိလိုက်တော့ သူရသတ္တိ ပြောင်မြောက်တဲ့ လက်ရွေးစင်- ၆၈-ယောက်နဲ့ ဦးအောင်ဇေယျ (ဘုရင်မဖြစ်သေးဘူး ရွာသူကြီးဘဲ ရှိသေးတယ်) ကိုယ်တိုင် စစ်သည် ၆၉- ယောက်ရှေ့ဆုံးက ဦးဆောင်ပြိး (ဗမာဟေ့ ဗမာဟေ့) အော်ထည့်ပြီး ထွက်တိုက်လိုက်တာ ရန်သူတွေ လန့်ပြေးပြေးရတာ စစ်ကိုင်းမှာ ကိုယ့်လူတွေက အချိန်ကိုက် လှေတွေ ရွှေ့ထားလိုက်တော့ စစ်ကိုင်းကမ်းမှာ ရန်သူတွေ အတုန်းအရုံး တပ်ဦးကျိုးသွားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ပြည်ရွှေဘိုရဲ့အောင်နမိတ် ဂဏန်းက - ၆၉ - ဖြစ်နေတာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ တခြားမြို့ တွေမှာ အောင်နမိတ်ဂဏန်း ရှိ မရှိ မသိပါဘူး။ ရွှေဘိုမြို့ ကတော့ အောင်နမိတ်က- ၆၉- ပါ။ ကျနော် ရွှေဘိုသား လူမိုက် ကလည်း ကျောင်းနေတာ နောက်ကျ တခါအတန်းကျော်တက်ပြိး ဆယ်တန်းကို - ၆၉- မှာအောင်ပါတယ်။ ကြံဖန် အဲဒီနှစ်ကို ချိန် ကိုက် ရောက်ရတာပါ။ ကျနော်တို့ တသက် ဗမာဟေ့ အော်ခွင့် ကြုံချင်ကြရင် အခုအချိန်ဟာ အောင်နိမိတ် ဆောင်နေတဲ့အချိန်ပါ။
အော် ကရင်သူပုန်တွေက မိတ္ထီလာကို သိမ်းလိုက်တယ်။ ၁၉၄၉- ဖေဖေါ်ဝါရီလောက်မှာပေါ့။ ပြီးမေမြို့ကို ကြေးနန်းရိုက်ပြီး လေယာဉ်နဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီး(နာမည်မေ့) လာမယ်။ မေမြို့ဗိုလ်မှုးတွေ တပ်မှုးတွေက လေယာဉ်ကွင်း ဆင်းကြိုကြတယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှ မင်းခမ်းမင်းနားလုပ်နေကြသေးတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်က အဲဒီ့ဗိုလ်မှုးကြီး ဆင်းလာတော့ ပြေးအလေးပြုကြတယ်။ လေယာဉ်ထဲက စက်သေနတ်တွေနဲ့ ကရင်တွေက ချိန်လိုက်ပြီး အားလုံးကို ဖမ်းထည့်လိုက်ပါတယ်..။ လေယာဉ်ကွင်းကနေ မြို့ထဲကိုဗိုလ်မှုးကြိးအမိန့်နဲ့ အားလုံး လက်နက်ချ ခိုင်းလိုက်တယ်။ ကရင်သူပုန်တွေက တပ်မြို့တော် မေမြို့ကို သေနတ် တချက်လေးတောင် မဖေါက်ဘဲ နာရီပိုင်းလေးအတွင်း တမြို့လုံးသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ နေ့လည်မှာ ဗမာ့တပ်မတော် စစ်သားအားလုံး သုံးပန့်ဖြစ်နေပါပြီ။ တပ်မတော်က အဲဒီလောက်ချာခဲ့တာပါ။ တကယ်က တပ်မှုးကြီးက သူ့အသက်အတွက် တပ်မြို့ကြီး တစ်ခုလုံးကို ထိုးအပ်လိုက်တာပါ။
ဖေဖေက ပြည်စောင့်ရဲ တပ်မှာ။ နှစ်ပွင့်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ သူက မေမြို့ အခုဘီအီး (ရေတံခွန်အနီး) တပ်ထိပ်မှာ မြို့အ၀င် လုံခြုံရေးတာဝန်။ ချက်ချင်း သူစစ်သည် တွေစုပြီး ခံစစ်ပြင်တယ်။ ပြိးတပ်ဆုတ်ဖို့ပါ တပါတည်း ပြင်ထားလိုက်တယ်။ မေမြို့က တပ်မြို့ လက်နက် ထောက်ပံ့မြို့။ လက်နက်တိုက်တွေပါ ကရင်သူပုန်က စီးမိသွားပြီ။ လာတာပဲ။ အင်အားက မမျှတော့ ခံစစ်ခံပြိး ဆုတ်ရတယ်။ ကျောက်မဲမှာ ရှမ်းတပ်တွေ ရယ် ဗ.က.ပ. တပ်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ကရင် တပ်ကို ခံတယ်။ ထပ်ဆုတ်ရတယ်။ နောင်ချို ဂုတ်ထိပ်မှာ နိုင်လိုက်တယ်။ ကရင်တပ်တွေဆီက လက်နက်တွေ တော်တော်လေး ရလိုက်တယ်။ ပစ်ကွင်းထဲ နယ်မကျွမ်းပဲ ကျွံလာတာ အကုန်သေကုန်တယ်။ ညကျတော့ အောင်သေအောင်ပွဲ သောက်ကြစားကြတယ်။
တိုက်ပွဲက ရက်ဆက်ဖြစ်ထား ငတ်နေ ပင်ပန်းထားတော့ စားသောက်ထားတဲ့ အထဲ အိပ်ဆေး အထည့် ခံလိုက်ကြရတယ်။ မနက် နိုးတော့ အားလုံး ကြိုးအတုတ်ခံထားရပြီ။ ဗ.က.ပ. က ဖမ်းထားလိုက်ပြီ။ ရှမ်းကိုတော့ မထိဘူး မဖမ်းဘူး။ ဖေဖေ တို့စစ်သား- ၇၅-ယောက် ကို သစ္စာဖေါက်ပြီး ဖမ်းထား တန်ဆာခံ လုပ်ပြိး ဗိုလ်နေ၀င်း ဦးနုတို့ဆီက လက်နက်နဲ့ငွေ တောင်းပြိးမှ တသုတ်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒါ ဦးစန်းယုရေးတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တိုက်ပွဲ စာအုပ်မှာ အဲဒီတိုက်ပွဲအကြောင်းရော ပြန်ပေးခ ညှိနိုင်းရတာကော မပါပါဘူး။ ဘီအီးစခန်းတိုက်ပွဲက မေမြို့ ရဲ့တခုထည်းသော တိုက်ပွဲပါ။ တမြို့ လုံးသိတယ်။ တညနေလုံး ချနေတာ။ ညပိုင်း မှောင်ရိပ်ခို ဆုပ်သွားချိန်အထိ ၅-နာရီလောက်ကြာတဲ့ တိုက်ပွဲကြီး။ အဲဒါကို ဖျောက်ထားပြိးရေးတယ်။ လက်နက်မချတဲ့ တပ်က ပြည်စောင့်ရဲတပ် (UNION MILITARY POLICE - UMP)။ သူတို့တပ်မတော်က ဗျူဟာကြိးတခုလုံး ဗိုလ်မှုးတွေအများကြိး အစုလိုက် အပြုံလိုက် အားလုံးလက်နက်ချ ထားတာ သိက္ခာကျနေလို့.. ဖေဖေက ဗ.က.ပ. တွေ လက်ထဲ (၂-လ) လောက်နေခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တခုရှိသေး။ ၁၉၅၉- ခုနှစ်မှာ အခု ၀ပြည် သွေးစည်းညီညွှတ်ရေးတပ်မတော်ပေါ့။ UNITED WA STATE ARMY အဲဒီတုံးက ဘယ်လိုခေါ်တယ် မသိပါဘူး။ ၀သူပုန်လို့ ဘဲ ကျနော်တို့ သိတာ။ ၅၈-မှာ ဖေဖေ က လာရှိုးပြည်စောင့်ရဲ တပ်ရင်း -၈- မှာ ဒု-တပ်ရင်းမှုး။ ဖေဖေ ကတောပစ် ၀ါသနာသိပ်ကြီးတယ် ။ အဲဒီတော့ ရောက်လေရာ အရပ်တိုင်းမှာ သူပုန်အဆက်တွေနဲ့ ညှိတယ် ခွင့်တောင်းတယ။ စနေ တနင်္ဂနွေ ဆို တောပစ်ထွက်တယ်။ သူတို့ကလည်း ဖေဖေတောပစ်တာ တော်တော့ အတူလိုက်ပြစ်ကြတယ်။ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လို့။ လာရှိုးကပြောင်းတော့ အဲဒီတုံးက မီးရထားလမ်း ဗုံးအခွဲဆုံးနေရာ တွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ဖြူးမြို့ နားက ညောင်ပင်သာ တပ်စခန်းစသစ်ဆောက်တယ်။ ကရင်သူပုန်နဲ့ဗ.က.ပ .နယ်။ တပ်စည်းရိုးကို သုံးခုကာထားရပြိး စည်းရိုးတခုမှာ မှိုင်းတွေ ထောင်ထားရတယ်။ အဲဒါကို ဖေဖေ က အနီးအနားက ကရင်ရွာသားတွေနဲ့ ညှိတယ် တောပစ်သွားတယ်။ ပုသိမ် ငပုတောဘက်မှာဆို ဂျမ်းကပ် ရွာဆိုတာ ကရင်သူပုန် ဌာနချုပ်။ အဲဒီမှာ သောင်းကျော် သိန်းကျော် ဆိုတာ ကရင်သူပုန် ညီနောင် ခေါင်းဆောင်တွေ။ ဖေဖေက တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်အောင်ညှိတယ်။
ဖြစ်ရင် လွယ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ လက်နက် (သိပ်အကောင်းတော့မဟုတ်) ၅၀၀- နီးပါး။ ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ ကိုယ်ပျောက်တပ်။ ကျနော်တို့က တပ်ခွဲလေးတခုထဲ ။ တပ်ခွဲက အင်အားအပြည့်မှ စစ်သား ၁၂၇-ယောက်။ ထိမ်းရတဲ့နယ်က အကျယ်ကြီး ငပုတောကနေ လပွတ္တာ ဟိုင်းကြိး ပြင်ခရိုင် အထိ။ ငွေတိုက်တွေ စပါးဒိုင်တွေ အုပ်ချုပ်ရတာ။ နောက် ဂျမ်းကယ် ထွက်ရရင် တောပစ်သေးတာ။ အဲဒီညီနောင်ထဲက တယောက်က ဆုံးသွားတယ်။ တယောက်က နောက်ဆုံး ဖြတ်လေးဖြတ် လုပ်လာတော့ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ရတယ်။ ကျနော်တို့ မုံရွာပြန်ရောက်နေတာ ကြာပြီ။ ဖေဖေ က ငပိရည် ငခြောက် ကြိုက်တတ်တော့ တောထဲကနေ မုံရွာကို ငပိရည် ငခြောက်တွေ ခိုးခိုးပို့ ပေးရှာတယ်။
သူအလင်းဝင်လာပြီး မုံရွာကို လာလည်တယ်။ သူ့သမီး ကရင်မချောချောလေးက ဖေဖေ့ အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့ သားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျသွားတယ်။ ရန်သူဖြစ်ပေမဲ့ ဖေဖေ က ကရင်တွေအပေါ် သိပ်ခင်တွယ်ရှာတယ်။ ဖေဖေ အမြဲပြောတတ်တယ်။ နေ၀င်းကွာ ဒီလောက်ရိုးသားတဲ့ သူတွေ ကို ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် မလုပ်တတ်ဘူး။ ငါသာဆို ကရင်မလေးတွေ ကို သူနာပြုသင်တန်းတွေပေး နိုင်ငံခြားကိုလွှတ်ရင် ဟိုမှာ ဒီလိုမေတ္တာ စေတနာ ရှိသူတွေ အင်မတန်လိုချင်နေတာတဲ့။
ကဲလားရှိုး ကိုပြန်ဆက်ကြရအောင် ဖေဖေ ၀-နယ်တွေ ဘက်အထိ တောပစ်ထွက်တတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်တွေက ၀-တွေက လူသားစားကြတုန်း။ လူစိမ်းဆိုရင် ပစ်သတ် စားကြတာ။ အဲဒီမှာ ၀သူပုန် နဲ့တပ်မတော်ကို ဖေဖေက ကြားက ညှိနိုင်းပေးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက် တခု ရသွားတယ်။ လက်မှတ်ထိုးကြတော့ တပ်မမှုးနဲ့ ထိုးရမှာ။ သူတို့ ဖေဖေ ကို ဘဲလက်ခံလို့ ပြည်စောင့်ရဲ ဗိုလ်ကြိးက တပ်မတော် ကိုယ်စား ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ တချက်လဲ ရှိသေးတယ်။ ဖေဖေ တို့ ပြည်စောင့်ရဲတပ်က ၀လူမျိုးနှစ်ပွင့် ဗိုလ်မောင် ကလည်း အဲဒီမတိုင်ခင်လေးမှာ ၀သူပုန်တွေဘက် တောပြန်ခိုသွားတယ်။ သူကစစ်ရေးအတွေ့ အကြုံလာယူတာ သက်သက်။ သူက ၀သူပုန်မှာ တပ်မှုးဖြစ်နေတော့ သူက ဖေဖေ့စိတ်ကို ယုံကြည်တာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ ဖေဖေ့ တပည့်အရင်း။
အဲဒါ ကျနော်လဲ မမှတ်မိပါဘူး။ သိတောင်မသိဘူး ထင်ပါတယ်။ မှတ်မိတာ တခုက ၀တပ်တွေက လက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့ ကျနော်တို့ ကြက်တွေ ရလာပြီး အိမ်မှာ ကြက်တွေ မွေးကြတယ်။ ကျနော်ရတာက ကြက်မလေး။ နောက်ပျောက်သွားတော့ ကျနော်ငိုရတယ်။ အဖေက တကောင် ထပ်ဝယ်ပေးတယ်။ ဟော မကြာဖူး ကျနော့်ကြက်မကြီးက ကြက်သားပေါက်လေးတွေနဲ့ ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်လေ ပျော်လွန်းလို့ တုန်နေတာဘဲ။ အခုချိန်အထိ သားသမီးတွေကို ကြက်ပေါက်လေးတွေနဲ့ ကြက်မကြီး ပန်ရောက်လာတာ ပြောပြတတ်တယ်။
အဲဒါ ဆက်ပါအုံးမယ်။ ၁၉၈၉ ကျတော့ အမေရယ် ညီဒေါက်တာဂျိုးဇက်ရယ်၊ ညီမ ဒေါက်တာအေးအေးမူ(ဂျူဒီ) တို့ကို ဖမ်းထားတယ်။ ကျနော်က ဖေဖေ့ကို ဖေဖေလည်း တပ်မတော်မှာ တာဝန်အကြားကြီး ထမ်းခဲ့တာဘဲ အသနားခံစာတင်ပေးပါ တောင်းဆိုတယ်။ ဖေဖေပြောတာက ငါတို့က လူစိတ်အပြည်နဲ့ စစ်သား ပြည်သူမျက်ရည် မကျစေရဘူး မျက်နှာပျက်တာမြင်ရင် ညှာတာတယ်။ အခုဟာက လူလိမ်တွေ ဓါးမြတွေ။ အသနားခံစာတင် ဒူးထောက်ရင် ဒူးဘဲ နာမယ် ဒီကောင်တွေမှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ပျောက်နေပြီ။ တင်လည်း ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။
အဲဒီတော့ ကျနော်က သူ့လက်မှတ်ကို လေ့ကျင့် မတူဘူး။ ခိုးထိုးပြီး အသနားခံစာ သူ့ လက်မှတ်အတုနဲ့ မေ လလောက်မှာ တင်ပါလေရော။ အခုဝန်ကြီးများရုံးမှာ တစ်စောင်။ နောက် စစ်ရုံးချုပ်ကြီးမှာ နှစ်စောင်။ တင်သမျှအားလုံးက ထောက်လှမ်းရေးဆီ အရင်ရောက်ပုံရတယ်။ နောက်နေ့ မယားညီအကိုတော် ဗိုလ်မှုးချုပ် ကျော်သိမ်းက ခေါ်ပါလေရော။ ခင်ဗျားဒါ ဘာလုပ်တာလဲပေါ့။ ကျနော်ကလည်း သူမသိလောက်ဘူးပေါ့။ ဖေဖေ က တင်ခိုင်းလို့ပါပေါ့။ ကိုလှုိင်မြင့် မညာချင်ပါနဲ့ မရဘူး ငုတ်မိသဲတိုင်ပေါ့။ မညာပါဘူးပေါ့ ရီတယ် ဟားတာပေါ့။ ရော့ ဒီမှာ ခင်ဗျားအဖေ လက်မှတ်အစစ်က။ ကျနော်မျက်လုံးပျူးသွားတယ်။ ဟိုက် - ဒီလူတွေ တော်လှချည်လားပေါ့။
သူက ရီတယ် ရီတယ်။ ကျနော်ကြောင်နေတာကို ရီနေတာ။ ပြီးမှ ခင်ဗျားကလေ ကျားရှေ့ မှောက်လျှက်လဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားမှ ကွက်တိတဲ့။ ပြီးမှ သူက ရှင်းပြတယ်။ ၀-တပ်မတော်နဲ့ မတ်လမှာ သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တော့ သူက အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးတွေ စကားပြောတိုင်း သူက ဦးဆောင်ရတဲ့သူ။ အဲဒီမှာ ၀တပ်က ၁၉၅၉- ခုနှစ်က ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကို ထုတ်ပြပါလေရော။ ပြသနာက ကျနော်တို့ တပ်မတော်ကြီးက တပ်မတော်မှတ်တမ်းရုံးကြိး အကြီးကြီး ရှိထားပြီး အဲဒီစာချုပ် ပျောက်နေတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့ ဖေဖေ့ဆီ မေမေ့ အကြောင်း ညီမောင် အကြောင်း မေးသလိုနဲ့ အိမ်ဝင်ထားပြီးပြီ။ ဖေဖေ့ကို ၅၉- ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စသွားဆွေးနွေး ထားပြီးပြီ။ လက်မှတ်ပါ ယူထားပြီးပြီ ။ အဲဒီတော့ ဖေဖေ့ လက်မှတ်က ဘိုလိုထိုးထားတာ ပြီးစောမောင် သန်းရွှေ ခင်ညွှန့် အာလုံး တကူးတက ကြည့်နေ မှတ်မိနေချိန် ကျနော်က တက်ပြိး လက်မှတ်အတုနဲ့ တင်လိုက်မိချိန်ပေါ့။ စဉ်းစားပြီး မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကြည့်ပေါ့။
တော်သေးတယ် ယောက်ဖက အယူမြန်လိုက်လို့။ ပြီးသူက ပြောသေးတယ်။ ခင်ဗျား အေးအေးနေ စမ်းပါ။ ခင်ဗျားအမေနဲ့ ညီတွေ လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့တို့အမှုက ဘာမှမရှိဘူး။ ဖိုင်က သေးသေးလေး။ မတရား တိုင်ထားကြလို့ စစ်နေရတာ။ ခင်ဗျားဖိုင်က လက်လေးချောင်းကို ကားပြပြီး ဟောဒီလောက်ရှိတာ။ ခင်ဗျား လုပ်မှ ထောင်ကျကုန်ကြမယ်။ ရှေ့နေမင်း ဆောင်မမှ ထောင်ကျ ဖြစ်နေမယ်ပေါ့။ ခင်ဗျားဓါတ်ပုံတွေက အိတ်နဲ့ ထည့်ထားတာ တစ်ပေ-ကျော်မြင့်တယ်။ ကြည့်ချင်လား ၀င်လိုက်တဲ့။ ခင်ဗျားကို ၇၁- ကတည်းက ဖိုင်ဖွင့် ထားတာကော သိလားပေါ့။ ကျနော်တော်တော် ပျာသွားတယ်။ ၈၈၈၈- လုံးလုပ်ခဲ့တာ မကြောက်မိသလိုဘဲ။ သူခြောက်လိုက်တော့မှ တော်တော်လေး ဖြုံသွားတယ်။
ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ တကယ်ဖြုံသွားပါတယ်။ သူပြောသလိုပါဘဲ။ အမေက အချုပ်- ၁၉- လအရမှာ ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ ညီမကတော့ နှလုံးဖေါက် သတိတွေ လစ်လစ်သွားလို့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု ညီမက SUN CLINIC မြောက်ဥက္ကလာမှာ ဖွင့် လူမှုရေးဆေးခန်းပါ ။ အခု ၂၀၁၁ မှာ ပထမ ရပါတယ်။ ဘီလ်ဂိတ်ခေါင်းဒေးရှင်း (MICROSOFT , BILL GATES FOUNDATION) က လာတုန်းက ညီမဆေးခန်းကို လာလည်သွားပါတယ်။ သူ့သားကဆေးကျောင်းသား ကားမောင်းကြမ်းတယ်။ အိမ်လည်တယ်။ တယောက်က အင်ဂျင်နီယာ။ တခါတခါ မိဘစကား နားမထောင်ကြဘူး။ နားမထောင်ကြရင် ကိုကို ပြောပေးပါဦး။ ကျနော်ပြောလိုက်ရင် တခွန်းဘဲ။ ပါးကိုနမ်း ကံတော့ ပြီး အိတ်ထဲ ဒေါ်လာတွေ ထဲ့ပြီ ။
ညီကတော့ အမှု နှစ်ခု။ တမှုကို ထောင် ၇-နှစ်။ နှစ်မှုကို ၁၄-နှစ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ စစ်ခုံရုံး ဗိုလ်မှုးက ဗိုလ်မှုး ခင်အောင်တင့်။ သူက အင်ဂျင်နီယာ။ လူစိတ်ရှိတယ် ။ အထက်က ဒါမောင်းဆိုလို့ သူက မောင်းရရှာတယ်။ ပြိးသူက အမှုနှစ်ခုကို တရက်ဆီ ခွဲချတယ်။ ဒုတိယအမှု မချခင်မှာ သူက သူ့ဒရိုင်ဘာကနေ အမှုနှစ်ကို တပေါင်းထဲ ပေးလို့မရဘူး ။ အဲဒီတော့ သူက အမိန့်မှာ သီးခြားစီလို့လဲ မှတ်ချက်မရေးထားဘူး။ တပေါင်းထဲ ကတော့ ရေးခွင့် မရှိဘူး။ ဘာမှ ရေးမထားဘူး။
ပထမ တမှု ရက်စေ့ရင် ကျနော်ဆီလာခဲ့။ အဲဒီကျမှ တပေါင်းထဲ ရေးထားတာပါ ဆိုပြီးလုပ်ထဲ့လိုက်မယ်ပေါ့။ ရက်စေ့တော့ သူက အင်းတိုင်ရောက်နေပြီ။ စုံစမ်းနေရတာ။ အဲဒီမှာ သူက အမိုက်ခံပြိးသူ မသိလို့ တပေါင်းထဲ ပေးထားမိပါတယ် လုပ်တော့တာ။ ကျနော့်ညီ နောက် -ဒုတိယ အမှု က တပေါင်းထဲနဲ့ လွှတ်လာပါတယ်။ မမေ့နိုင်ပါဘူးဗျာ။ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတော့ စိတ် ဘယ်လောက် လူစိတ်ရှိသလဲ ဆိုတာ။ ကဲပြန်ဆက်ကြရအောင် ကျနော်တို့ တပ်မတော်ကြီးက မှတ်တမ်းရုံးကြီး ရှိထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ပျောက်သွားရတယ်လို့ဗျာ။ ၀-တပ်က ဒီမိုကရေစီခေတ်က အခွင့်အရေးတွေ တောင်းပုံရတယ်။
ကဲကဲ ကျနော်တို့ တပ်မတော်ကြီးက ဖေါက်ပြန်နေပြီ။ လူထုက လက်နက်မရှိဘဲ တရုတ်ပြည်ကြီးက ကျူးကျော်နေတာကို သတ္တိနဲ့ဘဲ တွန်းလှန်ရတော့မှာ။ အလောင်းမင်းတရားကြီး သတ္တိမွေးရဲသူ တွေ ရှိကြသေးရဲ့လား။ ဗမာကွေ အော်ပြီး သေရဲသူတွေ ရှိကြသေးရဲ့ လား။ တရုတ်ကို တကယ်တိုက်ဖို့ ဖြစ်လာရင် လှိုင်မြင့် ရှေ့ဆုံးစစ်ကြောင်းကနေ ကမိခဆဲ အသေခံတက်ပြမယ်။ ရွှေဘို အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ ကျုံးရေနဲ့ ချက်ဆေးလာခဲ့သူ။ တရုတ်တပ်တွေကို ( -ီး ) ဘဲထင်တယ် ။
ဟေ့ တရုတ်ကို တိုက်ရမယ်ဆိုရင် မှတ်ထားပါ။ ၁၇၆၅ ကနေ ၁၇၆၉ အထိ တရုတ်တပ် မန်ချူးဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်ဇျူးဟာ ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြိး ၁၇၆၇- မတ်လ - ၂၈-ရက်နေ့မှာ အယုဒ္ဓယမြို့ကို အောင်နိုင်လို့ သိမ်းလို့ မပြီးသေးဘူး မြန်မာတပ်တွေ ထိုင်းရောက်နေတာသိတော့ အင်းဝအနား မြစ်ငယ်အထိ ချီတက်လာပါတယ်။ အင်မတန် အင်အားကြိးတဲ့တပ်မကြီးပါ။ (တရုတ်- မြန်မာစစ်ပွဲ wikipedia မှာ ဖတ်ချင်ရင် Click) အဲဒီအချိန်က တပ်မှုးကသာ သန်းရွှေဆိုရင် စစ်ပြေငြိမ်းလိုက်ပြီး ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်ဆိုပြိး ဆွေမျိုးဆိုပြိး အပေါက်ဖေါ်ပေးလိုက်ပြီ။ အဲဒီတုန်းက တပ်မှုးကြီးတွေက ဗလမင်းထင်၊ တိမ်ကြားမင်းခေါင်နဲ့ မဟာသီဟသူရ။ စစ်သူကြီးတွေအပြင် ဘုရင်ကြီး ဆင်ဖြူရှင် မင်းတရာကြီးကလည်း မေမြို့ အခု အနီးစခန်းနား ဆင်ခေါင်းရွာနေရာအထိ တရုတ်မန်ချူး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ရောက်နေပြီ။ မှုးမတ်တွေက ပုဂံကိုဆုတ်နေဖို့ပေါ့ အကြံပြုကြတယ်။
မင်းကြီးက ငါက အလောင်းမင်းတရားကြီး သွေးကွ စစ်ပြေးဖို့ ငါ့လာမပြောနဲ့ဟေ့ နောက်ဆုံး သွေးတစက် ကျန်သည်အထိ တိုက်ရင်းဘဲသေပြမယ်။ ဗမာကွ ဗမာ့သွေးမှန်ရင် သေမှာမကြောက်ဘူးကွ။ ဒီဘုရင်ကြိးသတ္တိက စစ်သည်တော်တွေကို အားတက်စေခဲ့တာက ဒီအင်မတန် ကြိးမားတဲ့ စစ်ပွဲကြီးရဲ့ စစ်ဦး ပြောင်းသွားစေတဲ့ စကားပါ။ ဘုရင်ကြီးရဲ မိန့်ခွန်းက ဗမာဆိုတဲ့ ဇာတိမာန်ကို နှိုးဆွပေးလိုက် ပါတော့တယ်။ အဲဒီစကားကို ဗမာစစ်သည်တွေကြားပြိး ဧရာမတရုတ်တပ်မကြိးတွေကို ဗမာဟေ့ အော်အော်ပြီး အတင်း တက်ခုတ် ကြတော့တာပါဘဲ။
ဝါရင့် မန်ချူး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြိး မင်ဂရူအီဟာ တရုတ်အင်ပါယာဘုရင်ကြီးရဲ့ သားမက်လညိး တော်တယ်။ အခု တာဂျက် ကစ်စတန်နိုင်ငံကြီးမှာ စစ်ပွဲကြီးနိုင်လိုက်လို့ သမီးတော်နဲ့ ထိမ်းမြား စေတဲ့အထိ စစ်တိုက် ကျော်ကြားတဲ့သူပါ။ ချီတက်လာတဲ့ တရုတ်တပ်တွေကလည်း အင်အားက တပ်မလေးခု အင်အား အသုတ်လိုက် အသုတ်လိုက် ၇သောင်းနဲ့ ချီတက်လာကြတာပါ။ မြန်မာတပ်တွေထက် အင်အား လေးဆကြီးပါတယ်။ အခုမိုးကုတ်လမ်းပေါ်က ခရီးတထောက်နား စခန်းဖြစ်တဲ့ ရွှေညောင်ပင်မှာဆိုရင် အုတ်တွေနဲ့ ခံတပ်ကြိးဆောက် ထားတာ မြို့ကြီး တစ်မြို့စာ ကျယ်ပါတယ်။ အင်မတန်လဲခိုင်ခန့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဒီတရုတ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြိးဟာ ဒီလောက်အင်အားကြိးမားစွာနဲ့ ချီတက်လာပြီး ဗမာကို စစ်ရှုံးလို့ ပြန်ဆုပ်ရတော့ မန်ချူးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း မိမိရဲ့ ကျစ်ထားတဲ့ ဆံပင်ကို ဖြတ်ပြီး တပ်မှုးတဦးရဲ့ လက်ထဲအပ်ပြီး သစ်ပင်မှာကြိုးဆွဲချ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေလိုက်ပါတယ်။ နောက်တပတ် အကြာမှာ ပီကင်းကနေ စာချွန်လွှာ ရောက်လာပါတယ်။ စာချွန်လွှာက ယူလာသူ သံတော်ဆင့်က လမ်းမှားပြီး နောက်ကျ တာဖြစ်နေပါတယ်။ ဧကရာဇ်ဘုရင်မင်းကြိးကိုယ်တိုင် မြန်မာကို မနိုင်ရင် ဆုတ်ခဲ့ဖို့ အမိန့်နဲ့လမ်းမှာ စစ်သည်တော်တွေ အသေအပျောက် နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ကြပ်မတ်ဖို အမိန့် စာရောက်လာပါတယ်။
တရုတ်ရာဇ၀င်မှာ ဒီမာန်ချူး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်ဂရူအီဟာ ရာဇ၀င်တွင်ကျန်ခဲ့တဲ့ စစ်သူကြီး အဖြစ် အလွန်ကျော်ကြား ထင်ရှားပါတယ်။ သူသတ္တိကို စံပြသူရဲကောင်း အဖြစ်ကနေ့တိုင် အသိအမှတ်ြု့ပုတာ ခံရပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဲ့ ကြီးတယ်နော်) ကတော့ တိုင်းပြည် ငတ်နေတာ အရေးမကြီးဘူး သူပုန်းဖို့ လှိုဏ်ခေါင်းတွေ ဦးစားပေး ဆောက်နေတာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ကြပါအုံး အရပ်ကတို့။ စစ်ပွဲက ဘယ်နေမှန်း မသိသေးဘူး ဘယ်သူနဲ့မှ လည်းရန်စောင်နေတာ မရှိသေးဘူး။ ဒီလောက်ကြောက်တတ်ရင် ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရာကြီး မိန့်တဲ့ စကားပြောင်းပြန် ယူကြည့် ဗမာ့သွေးစစ်ရင် သေမှာ မကြောက်ဘူးကွရဲ့ပြောင်းပြန် ဒီလောက်ကြောက်နေမှတော့ ဗမာ့သွေးမဟုတ်တော့ဘူး။
ကျုပ်ဟိုနှစ်တွေက ရေးခဲ့သလို ယိုးဒယားကို ဗမာတွေနိုင်တော့ ဆင်ဖြူရှင်မင်းကြီး လက်ထက်မှာတင် ယိုးဒယား သုံ့ပန်း ၃၆၀၀၀- လောက်ဖမ်းလာပြီး စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ကျောက်ဆည်ဘက်တွေမှာ ချထားတာ။ သန်းရွှေက ကျောက်ဆည်နယ်က။ ရုပ်ကိုလဲကြည့်။ အခုဖေ့ဘွတ်ပေါ်ကြည့်ပါ။ အသက်ကြီးကြီး ယိုးဒယားလူမျိုးတွေ ကမ်ပူးချားလူမျိုးတွေ ပုံကို ရှာကြည့်ကြပါ။ ကျုပ်ညွှန်းနေရင် စကားရှည်နေပါဦးမယ်။ ပြုံးနေတဲ့ ပုံဆိုရင် အမွှာလား အောက်မေ့ယူရအောင် တထေရာတည်း။ မ.ဆ.လ ခေတ်အထိ မန္တလေး စစ်ကိုင်းဘက်တွေမှာ ထိုင်းသွေးစစ်တွေ ရှိနေကြသေးတယ်။ သူတို့ လူမျိုးချင်း ပြန်အိမ်ထောင်ပြု မျိုးဆက် ထိန်းသိမ်းထားသူတွေ ရှိကြသေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်ဂရူအီဟာ နောက်ဆုံး စစ်ပန်းလာပြီး ရိက္ခာတွေ နည်းလာတော့ သူဟာ စစ်သည်တော်တွေနဲ့ ညီတူ ရိက္ခာကို မျှစားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သိပ်ပြတ်လပ်လာတော့ သူက အငတ်ခံ သစ်ရွက်တွေစားပြီး သူ့ရိက္ခာကို ဒါဏ်ရာရထားသူ စစ်သည်တော်တွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ တရုတ်စစ်သည်တော်တွေရဲ့ အသည်းထဲ စွဲနေအောင် ရာဇ၀င် တွင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာ နိုင်းယှဉ် ကြည့်ကြပေတော့။ ကျုပ်ကတော့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဟိုကရာဇ၀င် ဥဒါန်းအထိုးခံထားရတဲ့ မဟာသူရဲကောင်း။ မနိုင်းကောင်းဘူး ပဲမြင်တယ်။
ရှက်တတ်ရင် စဉ်းစားတတ်ရင် ပြောပါတယ်။ ကံကုန်တာ နတ်ကျွဲကို ကိုယ်တိုင် တက်သတ်လို့ နတ်ကျွဲခတ်ပြီး ကံကုန်ခဲ့ရတဲ့ သတ္တိရှင် အနော်ရထာ။ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာ ဖေါင်ဖျက်တိုက်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းတွေမှာက ကဗျည်းအထိုးခံထားရတဲ့ ဘုရင်နောင်နဲ့ နာဖျားနေတာကို ပြန်မဆုတ်ဘဲ တိုက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်တပ်တွေကို စစ်ဦးချိုးပစ်ခဲ့တဲ့ အလောင်းမင်းတရား ကြေးရုပ်တွေ တည်ထားပြီး သူမို့ဒီသတ္တိရှင် ဗမာစစ်ဘုရင်ကြီးတွေ ကို အားမနာ ပါးမနာဗျာ ကြေးရုပ်ကြီးတွေ အောက်မှာ ပုန်းဖို့လှိုဏ်ခေါင်းတူးရတယ်လို့ရာဇ၀င် ရိုင်းလိုက်တာ။ ထွီ ......
ဒီတရုတ်ဗမာ စစ်ပွဲကြီးတွေမှာ ဗမာစစ်သည်တော်တွေဟာ ခုတ်ရလွန်းလို့ ဓါးနှောင့်မှာ သွေးတွေ ရွှဲနေလို့ ဓါးနှောာင့်ကို အတော်ခြောက်အောင် သုတ်ယူရတဲ့အထိ အလွန်ကြီးကျယ်သော စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန် မာန်ကြီးလှတဲ့ မန်ချူးတရုတ် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးလည်း ဒီစစ်ပွဲအပြိး စစ်ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်လာပါတယ်။ ဒါကို စစ်သူကြီး မဟာသီဟသူက ရေရှည်တိုက်နေရရင် ကိုယ့်လူက တစတစ ပါးလာပြီမို့ လက်ခံလိုက်လို့ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးက ဒါဏ်ခတ်တာခံရပါတယ်။
မ.ဆ.လ .ခေတ်မှာလဲ တရုတ်ဟာ ဦးနေ၀င်းကို အတော်လေး ဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေ၀င်းလက်ထက်က အခု ဖါးကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းမှာ တရုတ်(မှတ်ပုံတင်မယ့်)တယောက်မိလို့ကတော့ ဘာမှအထက်တင်ပြမနေနဲ့ ပစ်သတ်ဘဲ။ တရုတ်ရန်ကိုအဲဒီလို မြင်ထားတာ။ အခုကျတော့ သန်းရွှေဟာ ဘာတွေ လျှို့ဝှက် သဘောတူညီချက်တွေ ထိုးထားလည်း ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ တရုတ်ပြည် တရုတ်ထင်သလို လုပ်တာခံနေရပါပြီ။
အော် ၁၉၈၃/၄ လောက်မှာ ထိုင်းဘုရင့်သမိးတော် သီရိဒုံ (သူတို့က စီရိထောန်း) လို့အသံထွက်တယ်။ မြန်မာပြည်လာလည်တယ်။ ဦးနေ၀င်းကို ဗေဒင်တွေက မိန်းမတက်ကိန်းမြင်တယ် အဟောတွေ ရှိလာတော့ ယတြာချေတာလုပ်တာ။ ထားပါတော့။ လာလည်တယ်။ ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင် ဧည့်ခံတယ်။ အဲဒီမှာ ဦးနေ၀င်းနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ပုံလေး မဂ္ဂဇင်းတွေ ရောက်တာတယ်။ ဟာသလေးပေါ့။
ထိုင်းဘုရင် မင်းမြတ်နှင့် သမိုင်းတရားခံ အာဏာရှင် မျိုးဆက် ဖခင်ကြီးဦးနေဝင်း
ဦးနေ၀င်းက သီရိဒုံကိုမေးတယ်။ မင်းလူဝင်စားဆိုကို ယုံသလားပေါ့။ ယုံတာပေါ့။ ကျမက ဗမာစစ်သားတွေ အယုဒ္ဓယမြို့ကို သိမ်းတုန်းက ကျမနဲ့ ကျမအကို နှစ်ယောက် အသတ်မခံရမှီလေးမှာ သစ္စာဆိုထားခဲ့တယ်။ ငါတို့ နောက်ဘ၀ လူပြန်ဖြစ်ရင် ငါတို့မောင်နှမနှစ်ဦးပေါင်းပြီး ဗမာတွေကို လက်စားချေခွင့်ရပါစေပေါ့။ ဦးနေ၀င်းက မင်းအခုချေလို့ရပြီလား လို့မေးတယ်။ ငါ့အကိုကြိးကို ငါပြန်မဆုံရသေ;ဘူး။ မင်းအကိုကြီး မင်းဘေးမှာ ရှိနေတယ်လေ မသိဘူးလားပေါ့။ သီရိဒုံက မသိဘူး ဘယ်သူလဲပေါ့။ ဦးနေ၀င်းက ငါလေလို့ မျက်ခုံးပင့်ပြုံးပြတယ်။ မင်းသမီးက ရှင်ကျအမကိုဆိုတာ သက်သေပြပါပေါ့။
မင်းအခုကြည့်လေ။ ဗမာတွေ ကိုငါ ဒုက္ခပေးထားတာ။ ဒါ တောင်အစဘဲရှိသေးတယ်တဲ့။ ဟာသလေးက လူတော်တော်များများက ကြားဖူးပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါအစဘဲ ရှိသေးတယ် ဆိုတာ မရှင်းကြသေးဘူး။ သီရိဒုံရဲ့ အကို အရင်းခေါက်ခေါက်က အခုမှ ပေါ်လာတယ်။ ယိုးဒယားသွေးစစ်စစ် ယိုးဒယား ရုပ်အပြည့်နဲ့ သန်းရွှေ။ ဗမာတွေ ယိုးဒယားက သုံ့ပန်း(ကျွန်) ဖမ်းလာခဲ့တာ အခုသန်းရွှေက ကျွန်တွေပို့ပေးပြီး ရာဇ၀င်အကျွေး ပြန်ဆပ်နေပါကြောင်းနဲ့ ဦးနေ၀င်းက သူ့ထက် လက်စွမ်းထက်တဲ့သူကို အပ်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ အတိတ်နဲ့ ဒါအစဘဲရှိသေးတယ်ပြောခဲ့တာ အခုမှ ရှင်းတော့တယ်။
တင်ပြရင်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားများ နားလည်ပေးကြပါဗျာ။ ဗမာသတ္တိ ဗမာ့သွေး အစစ်ရှိကြသေးရဲ့လား ကိုယ့်ကို ယ်ကိုယ် မေးကြပါဦးလို့။ ကျနော်ကတော့ တရုတ်နဲ့ချရရင် အခုစစ်ဗိုလ်တွေ ထဲက ကျနော်နဲ့ အသေခံ ချရဲသူ ရှိလား။ ကျုပ်ကတော့ ရယ်ဒီဗျာ။ တရုတ်တပ်ကို ( -ီး ) ဘဲထင်တယ်... နောက်ဗဟု သုတလေးပေါ့။ ကနေ့ မြန်မာတွေက ယိုးဒယားကို ထိုင်း ထိုင်း ဘဲခေါ်ကြတယ်။ အရင်က လွန်ခဲ့တဲ့ မ.ဆ.လ .ခေတ်အထိ ယိုးဒယားဘဲ ခေါ်တယ်။ မြန်မာဘုရင်တွေ လက်ထက်ကတည်းကပါ။ ဘုရင်နောင့်မင်းတရားကြီး လက်ထက် ယိုးဒယားမြို့ တော်က အယုဒ္ဓယ။ ပါဋိ စကား။ (အ) ဆိုတာက (မ)။ ယုဒ္ဓယ ဆိုတာက ကျရှုံး။ အ- ထဲ့လိုက်တော့ အဓိပ္ပါယ်က မကျရှုံးနိုင်သောမြို့လို့ ယတြာဗေဒင်နာမ ပေးထားတာ။ အဲဒီတော့ မြန်မာဘုရင်က ယိုးဒယားကို စစ်ချီရင် (အ) ဖြုတ်ပြိး ယုဒ္ဓယကို စစ်ချီတယ်လို့ ပြောစေတယ်။ ရှေ့ က ( အ ) ထည့်ပြောရင် သတ်စေ။ အဲဒီကနေ ယုဒ္ဓယပြည် ယုဒ္ဓယလူမျိုး ပြောရာကနေ ယိုးဒယားလို့ တွင်လာတာပါ။ ဒီလိုဘဲ မန္တလေးက အမရပူရ ဆိုတာကလဲ ပါဋိ စကား အ က မ။ မရ -ဆိုတာက သေတာ။ ပူရ ကတော့မြို့။ အ-မရ ဆိုတော့ မသေသောမြို။့ သေမှာကြောက်သူတွေ သွားနေကြပေါ့။ ဒီလိုဘဲ စင်ကာပူရ ဆိုတာ ကနေ့စင်ကာပူမြို့ တော်ပါ။ စင်က က င်္ခြသေ့င်္ ။
နောက်ဗဟုသုတလေးပေါ့။ ကြားဖူးတာပြောရတာပါ။ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်တော့ ဗမာတပ်တွေကို ကမန်းကတန်းစု ရတာ ဖွဲ့ရတာ။ တခါ အင်္ဂလန်ကနေ ၂-လက္မ မော်တာ။ ၃-လက္မမော်တတာတွေ ပေးလာတယ်။ မြန်မာတပ်တွေကို ဗိုလ်မှုးကြီးစိန်မှန် က မော်တာတွေ ပစ်တတ်အောင် လိုက်သင်ပေးရတယ်။ မြန်မာစစ်သားတွေက မော်တာကို မမှတ်မိကြတော့ အချင်းချင်း ပြောကြရာကနေ မခေါ်တတ်တော့ ဗိုလ်စိန်မှန် လာပို့ပေးတဲ့ပြောင်း လို့ပြောရာကနေ စိန်ပြောင်း ဆိုပြိး ဖြစ်သွားတာလို့ ပြောကြတယ်။ ဗိုလ်စိန်မှန်က လည်း လူရွတ်ကြိး။ ပ်ြညတွင်းစစ်မှာ ဆက်သွယ်ရေးတွေကလဲ မပြည့်စုံ။ စစ်ကလည်း မှန်းမရဘူး ။ ဒီကွေ့ဒီတက်လှော် ချနေကြရတာ ။
တခါမှာ ဗိုလ်နေ၀င်း ညွှန်ကြားချက်နဲ့ လွှဲနေတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းက သူ့ကို ထုချေ လွှာတင်ခိုင်းတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်း တပည့်ရှေ့ မှာ စာရွက်ပေါ် မှာ စာလုံး အကြီးကြီးနဲ့ (-ီး) ဆိုပြီးရေးပြီး ထုတယ်ကွာ ခြေတယ်ကွာ စာရွက်ကို ထုလိုက် ခြေလိုက်လုပ်ပြီး သူ့တပည့် လက်ထဲပေးလိုက်တယ်။ မင်းဆရာပြောလိုက်။ ကြာကူလီရိုက်ပြီး တရေးနိုးမှ လာမကျယ်နေနဲ့လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်...။ (အဲဒီအချိန် ဒေါ်ခင်မေသန်းက လက်ရှိလင်ကြီး ဒေါက်တာတောင်ကြီး နဲ့တောင် မကွဲရသေးဘူး။ ဦးနေဝင်းနဲ့ တွဲနေကြတုန်း ၅၁-ခုနှစ်မှာ ဒေါက်တာတောင်ကြီး ခရီးထွက်နေတုန်း ဗိုက်ထွက်လာလို့) အဲဒီလိုလူကြီး။ တိုက်ပွဲတွေ အနီးကပ်တိုက်ရင်း ကျသွားတယ် ထင်တယ်။
အားလုံး ကျေနပ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အားလုံးသတ္တိတွေ မွေးကြပါ။ သေကံမပါရင် မသေပါဘူး။ ကျနော်ငယ်ငယ်က ရေနစ်ဖူးတယ်။ ဟုမ္မလင်း မှာ။ ၂-နှစ် မပြည့်တတ်သေးဘူး။ သင်္ဘောပေါ်က ကျသွားတယ်။ ကျတာဘယ်သူ မှမသိဘူး။ ရေထဲ ပေ- ၃၀၀- မက မျှောသွားတယ်။ ချင်းစစ်သားတဦးက သူ့စစ်ဖိနပ်ကို မချွတ်ဘဲ ရေထဲ ခုန်ချ ကယ်ပေးလို့ ရှင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုဘဲ တခါ ငယ်ငယ် သင်္ကြန်အပြန် အကိုကြီးက ထန်းရည်တိုက် ပြန်လာတာ မူးပြီး ဂျစ်ကားပေါ်က ပြုတ်ကျတာ ကားက ဘီးချိတ်တဲ့ဘုကို ဘောင်းဘီနဲ့ ချိတ်မိပြီး ကားယားကြီး အောက်မကျဘူး။ သေကံပါရင် စကားတောင် မတတ်ခင်သေပြီးပြီ။
နောက်တခုက သန်းရွှေ ဟာလေ ကိုယ့်လူမျိုးချင်းကြရင် သိပ်ပက်စက်ယုတ်မာတာ။ တရုတ်ကိုကျတော့ ဖင်ပေးပေါင်းတယ်။ အခု ခင်ညွှန့် မြေးတွေဆို ဘယ်ကျောင်းကမှ လက်မခံရအောင် လိုက်ယုတ်မာတယ်။ နောက်ဆုံး ဟင်္သာတ ဘက်သွားထားတာကို ကျောင်းအုပ်ကို လက်ခံလို့ ဆိုပြီး နယ်အဝေးကြီး ပို့ပစ်တယ်။ ကျနော်တို့ အတိုက်အခံတွေ အိမ်ခန်းတောင် ငှားမရအောင် လိုက်ယုတ်မာတယ်။ တရုတ်ကို ဖင်ပေးသလောက် ကျနော်တို့ လူမျိုးချင်းအပေါ်ကျတော့ ယုတ်မာတယ်။ ဦးနေ၀င်းနဲ့က ပြောင်းပြန်။ ဦးနေ၀င်းက ဥပမာ ဦအောင်ကြီး လဖက်ရည်ဆိုင်လုပ်တယ်။ နေ့စဉ် သူ့ထောက်လှမ်းရေးတွေ သွားထိုင်နေရတာကိုက တဖက်လှဲ့နဲ့ ထောက်ပံပေးနေသလို။ သူက အလုပ်ထဲမြုပ်နေရင် အသာကြည့်နေတာ။
သန်းရွှေက မငတ်ငတ်အောင်လိုက်ကြပ်တာ။ အခု အဆိုတော် ဟေမာနေ၀င်း အဖိုး ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျက ဗ.က.ပ. သူပုန်။ တောထဲမှာ တောခိုနေတာ။ သူ့သမီးတွေက ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက် တက္ကသိုလ်တက်နေရင်း ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းနဲ့ ရတာ။ ဒီလိုဘဲ ကျနော် ၅--၆ တန်းတုံးက အဲဒီသောင်းကျော် ညီနောင်ရဲ့ သမီးတဦးက ကျနော်နဲ့ တတန်းထဲ။ အခုထိ အိမ်မှာ ဓါတ်ပုံရှိသေးတယ်။ ဦးနေ၀င်းက ရန်သူ့ သားသမီးတွေ ပညာတတ်လာရင် တော်လှန်ရေး စိတ်ပြောင်းလာမယ် ဒီလိုယူဆတာ။
သန်းရွှေဟာ အဲဒီလိုယုတ်မာ အောက်တန်းကျတာကို သူ့ကိုယ် ယုံတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ (မနိုင်လို့သည်းခံရသူတော့ မဆိုလိုပါ) ဦးနှောက် မရှိဘူးဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
အောက်ပါ သတင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်မှ ရေးသားဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...။
ထိုင်းငါးဖမ်း သဘောင်္တွေကိုတော့ ဖမ်းဆီး လူသတ် အစဖျောက်ပစ်ပြီး တရုတ်သဘောင်္ကိုတော့ ဘယ်လိုအရေးယူမယ် ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြရတာပေါ့..
တရုတ်သဘောင်္ဖမ်းပြီးရင် ဖမ်းစရာကျန်မှာ မဟုတ်ဘူး
မြန်မာ့ရေပြင်၌ တရုတ်နိုင်ငံမှ ခေတ်မီငါးဖမ်းသဘောင်္များ တရားမ၀င် ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီးနေကြောင်း ပင်လယ်ငါးဖမ်းအသင်း ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ ယင်းသို့ ခေတ်မှီ ငါးဖမ်းကိရိယာများဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းကြောင့် ရေသယံဇာတများ ဆုံးရှုံးသည့်အပြင် ပြည်ပမှ တရားမ၀င်ဖမ်းဆီးသူများကြောင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိသည်ဟု လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရသည်။
“တရုတ်ငါးဖမ်းသဘောင်္တွေ မြန်မာရေပိုင်နက်ထဲကို ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ ဒီလိုဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ နစ်နာရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခေတ်မီကိရိယာတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးတာဖြစ်လို့ ရေသယံဇာတကိုဆုံးရှုံးစေတယ်”ဟု ယင်းက ၁၅/၂၀၁၁ သား/ငါးကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေး၌ ပြောကြားသည်။ ငါးသယံဇာတမှာ ပင်လယ်ပြင်၌သာမက ကုန်းတွင်းပိုင်း အင်း၊ အိုင်လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျနေကြောင်း၊ ယင်းကို ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဟု ဆိုသော်လည်း ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းသဘောင်္များ များပြားလာခြင်း၊ ခေတ်မှီ နည်းစနစ်များဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံ ဖမ်းဆီးခြင်း ထို့ကြောင့် သယံဇာတ လျော့နည်းလာခြင်းဟု အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ပင်လယ်ငါးဖမ်းအသင်းက ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလျှင် တရုတ်သဘောင်္ဖမ်းပြီးရင် ဖမ်းစရာကျန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်က ပိုက်ကွက်စိတ်စိတ်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းတာဆိုတော့ ငါးမှုန်၊ ငါးဖွဲတောင်ကျန်မှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။ သယံဇာတ လျှော့နည်းလာခြင်းကြောင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို မှီခိုအားထားနေရသော ရေလုပ်သားများ အတွက် စားဝတ်နေရေးပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့ လာနိုင်ပြီး ရေလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် စက်ရုံ၊
အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့် သွားနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများမှ တရားမ၀င် ပင်လယ်ပြင်၌ဖမ်းဆီးမှုများအပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများတွင်ပါ တရားမ၀င်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကြောင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများရှိသည်ဟု တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။ ယင်းသို့ တရားမ၀င်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်အား အခွန်အခပေးဆောင်ရခြင်း မရှိသည့် အတွက် တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များထက် ဈေးကွက် အသာစီးရနေ၍ ထိခိုက် နစ်နာကြောင်းသိရသည်။
VOL7NO.19 THE FLOWER NEWS တရုတ်ငါးဖမ်းသဘောင်္များ မြန်မာ့ရေပြင်တွင် တရားမ၀င်